Etu aga-esi zere nkwụsịtụ Akaụntụ Amazon | Atụmatụ kachasị mma | Afọ
Usoro kachasị mma iji zere Nkwado Ndị na-ere Amazon
Amazon nkwusioru nkwusioru
O bu eziokwu ekwuputara na Amazon bu ebe ikpo okwu e-commerce kasi uku n’uwa. Otu nanị nwere ịjụ ajụjụ a, ”Kedu e-azụmahịa n'elu ikpo okwu bụ onye ndú na online ụlọ ahịa”, na yikarịrị azịza ị ga-enweta bụ Amazon. Na, nke a metụtara mba niile. Mana nke a pụtakwara na e nwere ọtụtụ ndị ọchụnta ego metụtara. Nke ahụ pụtara Amazon nkwusioru nkwusioru na amazon nkwusioru arịrịọ. (Azịza metụtara ya: Otu esi egbochi Amazon nkwusioru nkwusi)
"Onye ọ bụla nwere mmasị ịcha mkpụrụ osisi tupu oge ya. Onye ọ bụla chọrọ ka ọ gaa nke ọma ozigbo. Onye obula na acho ego di nfe. Ma onye ọ bụla maara na ọ dịghị ihe dị mfe ego."
N'ihi gịnị? Ọfọn, ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-etinye aka na ikpo okwu, otú ahụ ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ere ahịa Amazon ga-abawanye. Amazon iji jigide ogo ngwaahịa ya na-emetụta atumatu nke ndị na-ere ahịa kwesịrị iji nlezianya gbasoo. Na, ọ bụrụ na ị na-agụ isiokwu a, mgbe ahụ ị nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ na-eche ịbụ otu.
Ọ bụghị ụzọ dị mfe na Amazon ịga scot-free na ịghọ aghụghọ ule usoro. Ma, enwere oge mgbe ọbụlagodi AI algorithm nke Amazon na-emehie ihe. Otu enweghi ike ikwenye maka sistemụ a na-arụ ọrụ ma na-enweta ike ya site na koodu dị mgbagwoju anya.
N'agbanyeghị nke ahụ, mmadụ nwere ike ịlele mgbe niile ma ọ bụrụ na ha na-emehie ihe ọ bụla ma ọ bụ na-emebighị iwu nke Amazon. Enwere ike ịba mba na-emehie site n'akụkụ Amazon mana mmejọ ị mere nwere ike ịkpata nsonaazụ. Ya mere n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime usoro kachasị mma iji zere nkwụsịtụ ndị na-ere ahịa Amazon.
Usoro mwepu nkwụsị akaụntụ Amazon
E nwere ọtụtụ ihe mmadụ nwere ime iji na-ese n'elu mmiri dị ka onye na-ere ahịa na Amazon. Nke a apụtaghị na atụmatụ ndị a siri ike ịgbaso. Ma, ha chọrọ nlebara anya gị. Nke a bụ ihe kpatara enwere ọtụtụ ọrụ na-enye iji jikwaa akaụntụ ere gị maka ụdị nghọtahie ndị a. Ya mere, n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ kachasị mma iji zere nkwusio ndị na-ere ahịa Amazon.
Nye akwụkwọ na ihe Ọmụma gị kacha mma
Onye ọ bụla agụla ahịrịokwu ahụ, “A na m ekwupụta ya na ozi enyere bụ nke kachasị mma m maara”. Ọ bụrụ na ịnweghị, oge eruola ka ị gụọ ya ma were ya nke ọma. Ma ọ bụghị ya, ọ nwere ike ibute nkwụsịtụ ndị na-ere ahịa Amazon ma ị ga-arụsi ọrụ ike na-atụle ihe akwụkwọ mkpesa Amazon. Jide n'aka na ị bugoo ezi akwụkwọ.
Ihe omuma nke mmadu gha agha kwekọrọ na akwukwo ndi ochichi nyere ikike. Akwụkwọ dị ka akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, paspọtụ, nkwupụta ụlọ akụ, wdg. Ọ dịkwa mkpa ka ị bulite akwụkwọ doro anya. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ikpe, Amazon nwere ike ọ gaghị anabata arịrịọ akaụntụ gị. Ma, ọ bụrụ na i kpochapụla oge ahụ wee gbaa mbọ hụ na enweghị mmejọ ọ bụla. Na, ọ bụrụ na enwere ma dozie ha ASAP.
Soro iwu na ntuziaka Amazon jiri obi gị dum
Anyị atụleworị nke a ntakịrị. Ọ bụ ezie na iji weghara ya, mmadụ ga-ahụrịrị na ha na-agbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ nduzi ọ bụla edobere ha.
Amazon na-emelite usoro iwu ya mgbe niile. Ma dị ka onye na-ere ere, ọ bụ ọrụ gị ịnọ na mkpịsị ụkwụ gị wee hụ na ị naghị emebi iwu. Ọtụtụ ndị mmadụ kpachaara anya mee ya na ụfọdụ amaghị nke bụ eziokwu. Ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na ị na-emebi iwu mgbe ahụ, ị ​​na-anabata nnabata nkwụsịtụ Amazon.
Zere Ngwaahịa Ndị Nwere Nsogbu
Amazon ịbụ ikpo okwu ọ na-enye ọtụtụ edemede. Na ụdị ndị a, e nwere ọtụtụ puku ngwaahịa dị iche iche. Nke a na - emepụtakarị isi awọ na nghọta.
Otu nwere ike iche na ha nwere ike ire ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu. Ma, amachibidoro ụfọdụ ihe ma ọ bụ na-emebi iwu atumatu ọgụgụ isi.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu banyere Iwu ọgụgụ isi nke Amazon wee pịa njikọ ahụ Ebe a ma guo akwukwo anyi. Ọ bụ ezie na, akụkọ a na-ezube ka ị zere ire ngwaahịa ọ bụla nwere ike ịda iwu n'ụzọ ọ bụla. Ma, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ime ya mgbe ahụ, ọ ka mma ka ị gakwuru onye ọka iwu ka ịmee ya. Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara kpatara nkwusio onye na-ere ahịa Amazon.
Ngwaahịa nwere Nzaghachi Na-adịghị Mma
Ọ bụ nke ukwuu n'adịghị ka ihe Amazon na-ere ákwà na-emeputa. Nke a apụtaghị na ndị nrụpụta anaghị ere ngwaahịa ha ozugbo na Amazon. Mana n'ọtụtụ ọnọdụ, onye ọ bụla bụ onye nkesa ma ọ bụ onye na-ere ahịa. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ onye na-ere ahịa nkịtị. Ihe ọ bụla ọ / ọ nwere ike ịbụ, ọ dị mkpa ị paya ntị na ngwaahịa nwere nyocha dị njọ.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, Amazon na-elebara ngwaahịa nke ngwaahịa anya. Ya mere, ọ bụrụ nyocha ndị ị na-enweta maka ngwaahịa gị dị njọ mgbe ahụ ọ ka mma ma idozi nke ahụ ma ọ bụ kwụsị ịkwụsị ire ya. Ọ gaghị adị ogologo ma ị ga-enweta nke gị Akwụsịla akaụntụ Amazon. Na, Amazon ga-arịọ maka atụmatụ kwesịrị ekwesị nke ime ihe na amazon nkwụsịtụ mkpesa.
Na-eme ihe ngwa ngwa iji nwetaghachi Amazon nkwusioru nkwusioru
Probụ onye na-eme mkpesa bụ àgwà na-adịkarị n'etiti ndị mmeri. Ọ bụghị gbasara ọgụgụ isi ma ọ bụ ego. Iji mee ihe ọ bụla nke ọma, mmadụ ekwesịghị ịghọta ihe ịga nke ọma bụ. Mana nkà ihe ọmụma, nke a abụghị ikpe na Amazon. N'adịghị mma, ikpo okwu n'onwe ya nwere mmasị idebe gị na mkpịsị ụkwụ gị yana ụkpụrụ ha.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-enwe mmasị iji nyocha onwe gị, ọ ga-abụ na ịnwere ike ịnweta nkwenye ahịa Amazon. Idozi mmeghe tupu ikpo okwu ajuju bụ nsogbu kachasị mma. Ma ọbụlagodi na site na ohere ọbụla ị ga-ede Mkpesa nkwusioru Amazon mgbe ahụ yikarịrị ka ọ gaghị ewe gị ogologo oge iji weghachite akaụntụ gị.
Lelee Keywords Ji
Enwere ọtụtụ ihe nke Amazon nwere ike ịta akaụntụ akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị na-etinye ọnụ na nkọwa ngwaahịa gị, ọ bụ mmejọ na-agaghị ewere ya dị ka obere. Ọtụtụ ndị na-eji isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu ndị gha ụgha maka ngwaahịa ha na-enye. Ma ọ bụ nanị adịgboroja ikike nke ngwaahịa ha na nkọwa. Ọ bụrụ na ị na-eme nke ahụ mgbe ahụ ọ nwere ike iduga nkwụsịtụ onye na-ere ahịa Amazon.
Nke a na --emepụta ajọ nyocha maka ngwaahịa gị na - eme ka ọ bụrụ nsogbu gị ịre. Jide n'aka na ihe ọ bụla edere banyere ngwaahịa ị na-ere, bụ 100% eziokwu. Amazon achọghị ụdị ikwubiga okwu ókè. Ọ pụtaghị na ịnweghị ike ịzụ ahịa ngwaahịa gị ma kpọọ ya nnukwu. Ma, ọ na-ekwupụta eziokwu ahụ nke na-ekwe nkwa na ngwaahịa gị nwere ike ịnapụta. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike na-achọ usoro kachasị mma iji dee akwụkwọ mkpesa nkwụsịtụ Amazon.
Mgbasa ọsọ ọsọ ahịa Amazon
Ajụjụ mbụ mmadụ nwere ike ịjụ bụ, “Kedu ihe ọsọ ahịa Amazon”. Ọ bụ naanị mgbe ị nwere ọnụego ntụgharị dị elu. Nke a pụtara na ị na-ere ahịa n'ụzọ dị mma ma na-ebupụ ngwaahịa na ọnụ ọgụgụ mara mma. Nke a pụtara ọkwa dị elu na ogo na n'elu ikpo okwu. Ọ na - ebutekwa mmetụta na - eme ka ị nwekwuo ahịa. Kedu? Ọfọn, a na-akpọ ngwaahịa gị n'elu, nke a pụtara ndị ahịa na-elebara anya karị.
Nke a nwere ike ịbụ nsonaazụ nke ọtụtụ atụmatụ dị irè. Ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na metric ọsọ a adabaghị na akụkọ nzaghachi gị mgbe ahụ Amazon nwere ike itinye akaụntụ gị na njide. Otu nwekwara ike ịnweta nkwusioru ndị na-ere ahịa Amazon. Na ọnọdụ a, ọ ka mma ịlele ihe kpatara na anaghị anabata nyocha ọ bụla. Na, ọ bụrụ na enweghị nsogbu na njedebe gị wee ziga nkwupụta arịrịọ Amazon nke ọma ahaziri.
Nọgide Na-arụ Ọrụ Ọma
Nọgide na-arụ ọrụ dị mma nke ndị na-ere ahịa bụ isi ihe na-eweta ikpo okwu. Ikwesiri ime ihe niile kwesiri n'ike gị iji mepụta ahịa. A na-ere ahịa ogbenye maka ogologo oge nwere ike ime ka ị kwụsịtụrụ onye na-ere ahịa Amazon. Nke a abụghị mgbe ọ bụla ma gị na Amazon chọrọ otu ihe na akụkụ a ntụgharị ahịa ka mma.
Unyi na-ere ụzọ aghụghọ
Enwere ọtụtụ Joe nọ na-eme nkwusa unyi ere si eme na Amazon. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ha wee gụọ isiokwu anyị Ebe a. Agbanyeghị na ị nwetere echiche, na nkenke, ọtụtụ mmadụ na-anwa ịchọta ụzọ mkpirisi na Amazon iji nweta ọrịre ka mma. Ma, eziokwu nke okwu a bụ na enwere ike iduhie ụmụ mmadụ (n'ihi mmetụta uche
quotient) mana mmemme AI na eso usoro ntuziaka koodu ya. Usoro usoro ndị gara aga esighi ike iji debe njirimara ndị ahịa na ọrụ ndị na-ere ahịa. Ma ugbu a, sistemụ ndị a emeela nke ọma ọbụlagodi nit-pick. Nke a pụtara na otu onye nwere ike nweta ihe ịga nke ọma site na iji na-ere hacks ma usoro ga-eburu ihe ị mere. Nke a ga - eduga gị n'akụkụ akụkụ ebe nkwusioro ndị na - ere ahịa Amazon na - eme.
Jiri ozi ịntanetị
Nke a bụ naanị isi ihe agbakwunyere. Ọ dị mma mgbe niile ịnọgide na-enwe ezigbo mmekọrịta ndị ahịa. Iji ozi ịntanetị iji kpọtụrụ ndị ahịa gị n'oge oge ọ bụla ma ọ bụ okwu dị mkpa. Nke a nwere ike nweta gị isi brownie ihe maka mgbalị. A hụla na ọ nwekwara ike ịbawanye ahịa n'oge ụfọdụ. Ọ ka bụ ihe a na-ahụkarị, mana, ụfọdụ ndị ahịa na-amata ndị na-ere ahịa na Amazon. Nke a malitere ịmalite n'ihi nyocha dị mma na nkwenye siri ike n'akụkụ ndị na-ere ahịa. Respondzaghachi na nyocha (ọ dị mma ma ọ dị njọ) nwere ike ibuli mmekọrịta gị na ndị ahịa. Dịka onye ọchụnta ego, ị ghaghị ịghọta ma dozie ajụjụ ndị ahịa gị na mkpa ya.
Ọpụpụ ọrụ ị nweghị ike ijikwa
Enwere ọtụtụ ọrụ na ihe isi ike metụtara ịmechaa otu mbupu. Ma, ọ bụrụ n'ụzọ ọ bụla, ị nweghị ike ịnye arụmọrụ kacha mma, nyefee ya. Nke a na-aga maka mbupu, nkwakọ ngwaahịa, na ọbụna dobe mbupu (mana yana ụkpụrụ ụfọdụ). Na ngwụcha ụbọchị, onye ahịa nwere obi uto bụ azụmaahịa na-aga nke ọma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịdebe ahụ ike gị na-ere ahịa na nlele ma zere amazon na-ere nkwusioru mgbe ahụ ị nwere ike outsource na akụkụ anyị.
Anyị na APlus Global Ecommerce na anyị na-enyere ndị mmadụ aka weghachite akaụntụ ndị na-ere ha. I nwekwara ike ịkpọ anyị Ọrụ Mgbasa Ozi Amazon n'ihi na nke ahụ bụ akụkụ bụ isi nke ọrụ anyị. E wezụga nke ahụ, anyị na-enyekwa ọrụ ndị nwere ike igbochi nkwụsịtụ ndị na-ere ahịa. Na, anyị na-enye Atụmatụ ahaziri iche na amazon nkwusioru arịrịọ dika ahia gi choro na Amazon.
Ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya na azụmaahịa gị, ọ dị mfe ịnweta nkwusioro ndị na-ere ahịa Amazon. Ọ bụ ezie na iji akọ na omume dị mma, mmadụ nwere ike izere ya. Anyị ghọtara nsogbu gị dị ka onye na-ere ahịa na Amazon ebe ọ bụ na anyị na-emeso nsogbu ndị ahịa anyị kwa ụbọchị. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-ahụta ọrụ dịịrị anyị iji gbasaa ọha na eze.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụkwasị anyị obi dịka nkwado gị, ị nwere ike ịlele ọrụ anyị ma zigara anyị ajụjụ site na iji ibe obibi anyị. Anyị na-atụ anya na isiokwu a nwere ike ịbụrịrị enyemaka ụfọdụ nye gị. Ọzọkwa, daalụ maka ịgụ ya ruo ọgwụgwụ.
Akaụntụ Akaụntụ Amazon na-akwụ ụgwọ [Akwụsịtụrụ] - Gịnị ka ị ga-eme?
Ihe Mgbasa Ozi Akwụmụgwọ Amazon